Grand Royal Group International (GRGI) - Uncategorized - Grand Royal Group International (GRGI) - Page3Uncategorized - Grand Royal Group International (GRGI) - Page 3
Myanmar Distillery Co., Ltd အမည်အား Grand Royal Group International Co., Ltd အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
Myanmar Distillery Co., Ltd အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ယမကာဈေးကွက်အတွင်း ဈေးကွက် ဦးဆောင်နေသော ယမကာထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် Grand Royal Group International Co., Ltd အမည်သို့ တရားဝင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီး ယခုအချိန်မှ စတင် အကျိုးသက်ရောက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ “ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမည်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း မဟာဗျူဟာသည် Corporate Identity ကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသူများအား ဘုံနာမည်တစ်ခုအောက်တွင်သာ ကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြောင်းအလဲသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ပြည်သူ့ အကျိုးပြုဝန်ဆောင်မှု အပေါ်ထားရှိသော ကတိကဝတ်များသည် ကျွန်ပ်တို့အတွက် ပိုမိုအား ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထား ပါတယ်” ဟု Grand Royal Group International Co., Ltd ၏ CEO Mr. Sanjay Gupta မှ ပြောကြားပါသည်။ ဒါ့ပြင် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ Shareholder များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ပြောင်းလဲသွားမည် မဟုတ်ပါ။
Grand Royal သည် မြန်မာနိုင်ငံ ယမကာနယ်ပယ်တွင် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ် ၂ စု ကျော်ကြာ သက်တမ်းရှိသူ လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် စားသုံးသူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလူထု အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လည်း ဂုဏ်သရေရှိပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရခြင်းအတွက်လည်း အထူးပင်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် နေ့မှစပြီး ကျွန်တော်တို့၏ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်များကို နှစ်စဉ်စိုက်ထူလာနိုင်ခဲ့ပြီး စားသုံးသူများအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ၏ GRG မှ ထုတ်လုပ်သော Whisky products များဖြစ်သည့် Grand Royal Black, Grand Royal Special Reserve, Grand Royal Signature နှင့် Grand Royal Smooth တို့သည်လည်း နိုင်ငံတကာမှ ချီးမြှင့်ထားသော ဆုတံဆိပ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ logo ပြောင်းလဲခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေတဲ့ မဟာဗျူ ဟာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Grand Royal ကို ပိုမိုယုံကြည် ချစ်မြတ်နိုးလာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့၏ Grand Royal Whisky ကို နိုင်ငံတကာ မှ ယမကာနှင့်ပတ်သက်သည့် Research အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော International Wine and Spirit Research မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးမားဆုံး ယမကာအမှတ်တံဆိပ် ၁၀၀ တွင် အဆင့် ၄၁ အဖြစ်သတ်မှတ် ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး ယမကာထုတ်ကုန် အမျိုး ၁၀၀ တွင် အဆင့် ၃၈ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမွေးဖွားပြီး နိုင်ငံတကာမှ ယုံကြည်လေးစားရပြီးဖြစ်တဲ့ Grand Royal Whisky Brand နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Grand Royal Group Corporate ကုမ္ပဏီ၏ Image တို့သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အားဖြည့်ပံ့ပိုးရင်း ပိုမို အောင်းကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါသည်။
ဒီပြောင်းလဲမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုရေး အပြင် စီးပွားရေး အကူအညီတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်း ဝေးလံခေါင်ဖျားသော မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံအပြားမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံသား တွေအတွက် လူမှုတာဝန်ကျေပွန်မှုတွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ရေးတွေ အတွက်လည်းအကျိုး သက်ရောက်မှုများ စွာရှိနေလာမှာဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ CSR လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူသိန်း ပေါင်းများစွာကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ခံယူချက်သည်လည်း ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ တီထွင်ဆန်းသစ် သော ဖန်တီးမှုများနှင့် စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကြိုက်အများဆုံး သော အဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီဖြစ်ရန် သာမက ရေရှည်တည်တံ့ ရပ်တည်နိုင်ပြီး တာဝန်ကျေပွန်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ရန်အစဉ်အမြဲ ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ထို့အပြင် တာဝန်ကျေပွန်သော လုပ်ငန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာမှ ပြဌာန်းထားသော Sustainability Goals များကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း ကျန်းမာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော လုပ်ငန်းခွင် အဖြစ် Great Place To Work Institute မှ ပေးအပ်သော ဆုကိုရရှိထားသည့်အပြင် Whistleblowing Policy နှင့် Anti Sexual Harassment Policy တွေကို လည်းထုတ်ပြန်ထား ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသူများ အတွက်လည်း နှစ်စဉ် Recycle ပုလင်းပေါင်း သန်း ၁၂၀ ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် CSR လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ ပါသည်။
Myanmar Distillery Co.,Ltd Name Change to Grand Royal Group International Co.,Ltd English Version
World HRD Congress recognizes Grand Royal Group as Dream Employer of the Year in 2019
Grand Royal Group သည် ယမကာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင် (၂၀) ကျော်ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ဂုဏ်သရေရှိပြီး ယုံကြည်ဖွယ်ကောင်း သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထု၊ စားသုံးသူများနှင့် ကျွန်တော်တို့၏အလုပ်သမားများအတွက် တည်ရှိနေသည်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိ ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဖောက်သည်များ ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုများသည် ကျွန်တော်တို့၏ ပထမဦးစားပေးအဆင့်တွင် အမြဲတမ်းပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့၏ အသက် သွေးကြောအဖြစ် အမြဲတန်ဖိုးထားလျှက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ၁၅ ရက်နေ့ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Pan Pacific Hotel တွင် World HRD Congress မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော လုပ်ငန်းရှင်၊ပညာရှင်ထူးချွန်ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားတွင် “Dream Employer Of The Year 2019” ဆုကို ကျွန်တော်တို့ Grand Royal Group မှ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။
ဆုရရှိသောခဲ့သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းအားကောင်းခြင်း၊ အလုပ်နှင့် လက်တွေ့ဘဝညီမျှသော ပေါ်လစီများကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ တရားမျှတမှုရှိသော ဆုပေးခြင်းနှင့် အသိ အမှတ်ပြုခြင်းများ စသည့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော လူ့စွမ်းအာအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ အချက်များ ကို အဓိကအခြေခံပြီး ရွေးချယ်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Grand Royal Group သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ရှုထောင့်အပေါ်တွင် တက်ကြွလိုလားစွာ လှုပ်ရှားပါဝင်ခြင်းကို ဦးစားပေး ရှေ့တန်းတင်လျှက်ရှိပြီး၊ ၎င်းအချက်ကြောင့် ဤဆုကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Grand Royal Group သည် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တိုးတက် အောင်မြင်မှု အလားလာ အပြည့်အဝရှိသော အခွင့်အရေးများရရှိကြ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းခွင်
တစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့် World HRD Congress မှ ဤ ဂုဏ်ပြုဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
World HRD Congress recognizes Grand Royal Group as Dream Employer of the Year as well as Best Employer in 2019 English Version
Grand Royal Group ၏ ခံယူချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် မိမိနှင့် ဆက်နွယ်နေသူများအတွက် ရေရှည် တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးစေရန် “Being A Good Corporate Citizen” ဆိုသည့်အချက်ကို အမြဲဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက်နွယ်နေသူတွေအတွက် လူနေမှုဘဝနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးအမြတ်တွေအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ် (CSR) ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ Grand Royal Group ၏ CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ် ကျပ် ၁.၅ ဘီလီယံမှ ၂ ဘီလီယံအထိ နှစ်စဉ် လျာထား သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “Clean Water Project” သန့်စင်သောရေစက်တိုင်းရဲ့ အဖိုးတန်မှုဆိုတဲ့ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာဆိုရင် ယခုအချိန်အထိ အိမ်ခြေပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်ခန့်နှင့် လူပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ခန့်ကို ရေသန့်ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိကုသခြင်း လုပ်ငန်းဟာလည်း လူပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော မျက်စိဝေဒနာတွေကို ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSR လုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှပေးအပ်တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ် တနှစ်စာလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံး CSR လုပ်ငန်းဆုကို ၃ နှစ်တိတိ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် Grand Royal Group သည် ကော်ပိုရိတ်တာဝန်ကျေမှုများထဲမှအရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်သော အခွန်ပေးဆောင်မှုကိုလည်း အစဉ်အမြဲ အလေးထားလိုက်နာ လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော်ခန့်ကို ပေးဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်းကြီးများစာရင်းတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက နှစ်စဉ်ဖော်ပြခံရလျှက်ရှိ သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှပေးအပ်သည့် ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်းကြီးများ အတွက် ဂုဏ်ပြုဆုများကိုလည်း နှစ်စဉ်ရရှိလျှက်ရှိပါသည်။
Grand Royal Group ၏ “Clean Water Project” ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့ရာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကော့မှုးမြို့နယ်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မိထ္တီလာနှင့် ကျောက်ပန်းတောင်း ခရိုင်တို့တွင် အောင်မြင်စွာနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် နောက်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် “Clean Water Project” ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ အသုံးပြုလျှက်ရှိ နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို Project ကို ၂၀၁၈၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ပန်းတနော်နှင့် မအူပင်မြို့များတွင်ရှိသော သောက်သုံးရေ ခက်ခဲနေသည့် ရှမ်းကွင်း၊ ဘုရားချောင်း၊ ပလောင်နှင့် အကွီကျေးရွာတို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၎င်း Project သည် အိမ်ခြေပေါင်း ၁,၃၈၀ နှင့် လူပေါင်း ၆,၁၉၉ တို့ကို သန့်စင်သော သောက်သုံးရေရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် Clean Water Project ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သောက်သုံးရေရှားပါသောဒေသများတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် Survey ဆင်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ Project အတွက် သိန်း ၄၀၀ ခန့် ကုန်ကျခံခဲ့ပြီး ရေသန့်စက်အဆောက်အဦး ၄ ခု၊ ရေသန့်စင်စက် ၄ ခုနဲ့ ရေစုကန် ၄ ခုကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Project ကတော့ မတ်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲက အောင်မြင်လို့ စတင်လည်ပတ်ခဲ့တာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခမ်းအနားကတော့ ဇွန်လ ၂၀၁၉ မှလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ အတူ Survey လုပ်ပြီးမှ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ရွာတွေကို ရွေးထုတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု CSR Manager ဦးတင့်ဝေမှ ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ Grand Royal Group အနေဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝတိုးတက်စေဖို့အတွက် အစဉ်အမြဲ တတ်အားသရွေ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလေးထားရတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSR လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ မျက်စိကုသခြင်း၊ သောက်ရေ တူးဖော်လှူဒါန်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ နိုင်ငံအားကစားအတွက် ဘောလုံးအသင်းအားပံ့ပိုးပေးခြင်း အစရှိတဲ့ ပုံမှန် လုပ်ငန်းတွေအပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျ ရောက်သောဒေသမျာတွင်လည်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Being A Good Corporate Citizen ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ CSR အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု Grand Royal Group ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ ဦးအောင်မိုးကျော်မှ ပြောကြားပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအစက သောက်သုံးရေတော်တော်ကို အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ မိုးတွင်းတော့ မိုးရေခံသောက်ရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေဆို ချောင်းရေနဲ့ လက်ယက်တွင်းပဲအားကိုးရတာ အခုတော့ တရွာလုံးကျန်းကျန်းမာမာ၊ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့သန့်စင်တဲ့ရေကို သောက်သုံးနိုင်ပြီ။” ဟု အကွီကျေးရွာမှ ဦးအုန်းသိန်းကပြောပါသည်။
Grand Royal Group Celebrate for Additional Success of 2019 CSR Project English Version
Posted on May 16, 2017 December 10, 2018
Ma Khin Phyu Phyu Tin
“I joined Grand Royal Group as Junior Accountant and try my best to becomeaSenior Accountant step by step. Now it has been9years since I joined this organization. At first, I realized that it seemed different from what I had learned to how it’s applied in real life as an accountant. I work hard, try my best and take my supervisor’s guidance.”
This was my first job and it has become more systematic because I now use the new ERP system. Thanks to the company training and support throughout my career, I now have become an important part in this organization. I complete my tasks and responsibilities regularly, I comply with my supervisors guidance and give my role all my best efforts, that’s why I received Best Employee Award for 2014-2015.
Every year when it’s time for the company to make salary adjustments, I getaraise. Also, I was awardedagold medal for my long term service. Not only do I keep learning to develop my skills and knowledge, but I also support and contribute what I learned with my colleagues. I will keep trying, choosing and doing the right thing, not only for myself but also for my organization.”
List of awards from the industry
Photograph of other donations
Photograph of the Thai Bev donation
Photograph of Myanmar Employer Award 2020
List of community donations